8 Zavatra Tokony ho fantatry ny olon-dehibe ny momba ny ACT sy ny fanomanana test SAT
by Ryan Hickey, tonian-dahatsoratry ny Peterson sy EssayEdge
Vonona hiova ianao. Angamba ny fotoana nokarohanao tamin'ny asanao amin'izao fotoana izao dia tsy nahitam-bokatra noho ny nantenainao tany am-boalohany. Angamba efa niova ny tombontsoanao, na mila vola bebe kokoa . Na inona na inona toe-javatra iainanao, dia fantatrao fa te hiverina any an-tsekoly ianao amin'ny dingana iray vaovao (na voalohany).
Ny fiomanana ho amin'ny dingana goavana hiverina any an-tsekoly dia mety ho sahiran-tsaina, indrindra indrindra satria maro ny zavatra niova hatramin'izay niainanao. Marina izany indrindra raha miatrika fitsapam-pisedrana (ACT na SAT). Ireo soso-kevitra valo etsy ambany dia afaka manampy anao handefa ny tontolon'ny fitsapana fitsapana, ary hanampy anao hanapa-kevitra hoe inona no fitsapana azonao entina hanohanana ny asanao.
Fantaro izay fitsapana tokony horaisinao
Ny ACT dia nahazo laza nandritra ny taona maro, ary ny SAT dia miovaova be. Alohan'ny hanohizanao ny iray, dia azonao antoka fa ho raisina any amin'ny oniversite tianao ampidirina ny lisitrao. Azo antoka fa tsy te-haka ny ACT ianao ary hahita fa ny SAT no fitsapana ilaina ho an'ny sekolinao! Raha tsy mahita ny fampahalalana ao amin'ny tranonkalan'ny sekolinao ianao, miantsoa na manaova fotoana amin'ny mpanolo-tsaina iray.
Jereo raha toa ka azo alaina ny Valiny Avao sy Valiny
Ny fikambanan'ny ACT sy ny SAT dia mitazona ny ankamaroany izay miverina any amin'ny taona maromaro, koa raha tsy manana ny rakitsoratra teo aloha ianao dia mifandray amin'ny orinasa fitsapana ho an'ny kopia. Raha toa ianao ka eo amin'ny faha-30 taonany na mihoatra, ny mari-pahaizanao amin'ny 17 taona dia mety tsy ho lanja tsara indrindra amin'ny atidoha ankehitriny , noho izany dia azonao atao, ary angamba tokony hamerina ilay fitsapana. Ny ACT, ohatra, dia manan-kery mandritra ny dimy taona monja.
Fantaro ireo fe-potoana fitsapana ho an'ny sekolin'ny safidy
Azonao atao ny mampihetsi-po ny tatitra momba ny tanjonao, fa ny tsara indrindra dia ny hahazoana antoka fa halefa any amin'ny oniversite ny safidinao amin'ny fotoana be dia be. Tsy misy zavatra ratsy kokoa noho ny ezahanao hamaivana ny fitsapanao (sy ny fandalinana fotoana) amin'ny fanantenana fa tonga any amin'ny oniversite izy amin'ny fotoana. Nahoana ianao no manampy anao?
Ataovy azo antoka fa fantatrao hoe aiza ny foibe fitsapana. Betsaka ny ACT sy ny fitsidihana SAT no apetraka any amin'ny oniversite. Avy eo, misoratra anarana vao maraina, manome fotoana betsaka hianarana, ary manome ny orinasa fitsapana fotoana betsaka mba hahazoana ny dipao amin'ny college. Tsotra tsotra izao ireo andro ireo mba hisoratra anarana amin'ny ACT na SAT noho ny fanodinana an-tserasera.
Fandalinana, Fianarana, Fianarana
Romilly Lockyer - Ny Sary Banky - Getty Images 10165801
Misy safidy maro kokoa noho ny teo aloha mba hanampy anao hisoroka, anisan'izany ny fianarana fianarana amin'ny Internet, boky sy CD interactive. Tsara ho azy ireo raha mampiasa azy ireo ianao, na izany aza, mba hahalalanao ny fotoana laninao, ary ataovy azo antoka fa manokana ny angovo ilaina mba hahazoana ny isa tianao. Raha manana fotoan-tsarotra amin'ny fizarana iray ianao dia aoka ho azo antoka fa mifantoka amin'izany, fa aza manao tsinontsinona ny zavatra tsara anananao. Fandalinana, fianarana, fandinihana !
Fantaro rehefa misy ny fiovana noho ny fiovana
Ny ACT sy ny SAT dia mitovitovy foana amin'ny taona maro, saingy matetika no tsy dia lehibe loatra, ary ny tena lehibe, ny fiovana amin'izy ireo izay mila mahafantatra. Ohatra, tamin'ny taona 2016, ny SAT dia niatrika ny fiovana lehibe indrindra hatrizay (tsy misy lanjany ho an'ny fametrahana fanontaniana tsy mety, famaritana maromaro amin'ny teny eo amin'ny fitsapana, sns.). Zava-dehibe ny handinihanao ny fitsapana izay homena anao. Ataovy azo antoka fa efa vita ny fotoam-pandalinanao. Tsy te hiomana amin'ny tolo-dalan'ny fandalinana efa vita momba ny fitsapana vaovao 2016 ianao!
Ampiasao ny loharano rehetra azo alaina
TV - Paul Bradbury - OJO Sary - Getty Images 137087627
Mety ho gaga ianao mahita fa ny oniversite misy safidy dia manolotra loharano tokana ho anao ho olon-dehibe miverina any an-tsekoly. Maro amin'ireo loharanom-baovao ireo no ahitana ny fanomanana fitsapana satria fantatry ny oniversite fa ny toe-javatra iainanao dia tsy mitovy amin'ny an'ny ambaratonga faharoa.
Misy ihany koa ny fahafahana mampiasa ny kilasim-pitenenana misokatra, indrindra raha tsy nampiasa algebra ianao na nanoratra lahatsoratra iray nandritra ny taona. Ny sasany amin'ireo oniversite ambony indrindra manerana izao tontolo izao, toa an'i MIT sy Yale, dia manolotra kilasy virtoaly tsy misy kalitao ho an'ny fahalalahana. Ny sasany dia mitaky fisoratana anarana, raha ny hafa dia afaka atolotra amin'ny aterineto amin'ny alàlan'ny tranonkala toy ny YouTube.
Inona ny MOOC?
Ny Pros sy ny Tsinin'ny MOOCs
8 Toerana ahafahana mahita video malalaka fianarana
Tsarovy ny herinao
Sary an'ny Morsa - Digital Vision - Getty Images 475967877
Angamba ianao nankafizinao tamin'ny teny Anglisy satria tia mamaky boky ianao, saingy miverina any am-pianarana ianao mba hahazoana mari-pahaizana momba ny fitantanam-bola satria ianao dia naka traikefa matematika teo amin'ny toeram-piasana ary nahita fa tianao izany. Mbola eo foana ireo fahaiza-mamaky sy manoratra ireo, raha tsy mafana fo. Avelao izy ireo ary alao indray ireo fitaovam-piasana ireo ary azonao atao ny manazava tsara sy ny matematika. Na inona na inona ny herinao sy ny fahalemenao, ny fandalinana hentitra dia mety hitondra fahasamihafana lehibe eo amin'ny isa farany.
Raha miverina any am-pianarana ianao amin'ny diplaoman'ny diplaoma, dia hahita fanazavana momba ny fanadinana fidirana amin'ity lahatsoratra ity ianao: Ny Exam ny Entana tokony hiditra any am-pianarana
Aza hadino ny manamarina ny tranokalan'i Kelly Roell amin'ny fampahalalana fanampiny momba ny fanomanana fitsapana: About Test Prep
Jereo ny lisitry ny lahatsoratra rehetra nosoratan'ny mpitsidika malaza Ryan Hickey tao amin'ny pejy bio: Ryan Hickey Bio
Hevitra ho an'ny vehivavy amin'ny andro iraisam-pirenena
Manana Ireo 5 Tena Ilainao ve Ianao?
Fomba hanoratana hevitra amin'ny dingana 5
5 An-tsitrapo sy Fihetsiketsehana ho an'ny Mpianatra tsy mandady
Inona avy ny firenena manana lozisialy loteria?
Manoratra ny tanjona SMART
Ny boky ara-baiboly tsara indrindra
Ahoana ny fampiasana 'Parecer'
Ny Tiger Woods 'nandresy
10 Fitaovam-piadiana tsara indrindra amin'ny '90s
Ahoana no iarahan'i Jell-O Gelatin?
Ahoana no hamantarana ny tena Frank Lloyd Wright House
Fomba 10 Ahitana ny Sikhism Amin'ny Islam
Structure of an Essay Descriptive
Inona no dikan'ny fisiahana?
Ny Slot amin'ny Football - Famaritana sy fanazavana
Ahoana ny fangatahana soavaly iray
Sarin'i Steve Bannon
Lithium facts - Li na Element 3
Tiger Woods vazivazy
Olona eo amin'ny fiainan'i Kaisara
Bossa Nova: Avy amin'ny niandohany ho an'ny Mpihira ankehitriny
Inona no atao hoe taom-piotazana fisakafoanana?
Vital records of the Virgin Islands - Birth, Death, Marriage and Divorce
Lisitry ny lisitry ny tennis